I-SXAE-320 i-quality quality tailor eyenziwe ngokuzenzekelayo i-CNC 3 imibala yokuprinta imishini-sxaequipment-Gofair Chinese China Manufacturer Supplier Factory
South Africa Xhosa I-SXAE-320 i-quality quality tailor eyenziwe ngokuzenzekelayo i-CNC 3 imibala yokuprinta imishini
Igama lomkhiqizo: i-CNC 3 imibala yokuprinta imishini yoshicilelo ngokuzenzekelayo
Isicelo: i-multifunctional, i-rotary, i-multicolor, kwimveliso ye-cylindrical.
iibhotile, izimbiza, iplastiki kunye ne-glass tube, i-cap, ityhubhu ye-rubber, i-plywood, i-lipstick njl.
Ukulayishwa okulinganayo okanye okunqamlekileyo kunye nokulayishwa;
Isixhobo sothuli olunamaphepha;
I-Flame kwangaphambili kunyango;
Ukubhalisa ngokuzenzekelayo kunye nerejista enkulu;
Akukho nqaku lokushicilela;
Ukhetho lwe-UV ombane; Inkqubo ye-UV yokuphulukiswa kwe-UV okanye ukomisa umoya oshushu, njl.
2. Ukukhethwa kwendlela eyahlukileyo, ukutshatyalaliswa okutshisayo, ukubhalisa, ukutshintshwa kweentambo, kunye ne-varnish njl.
3. I-brand yezona ndawo eziyinhloko yiTaiwan, iFransi, iJamani, i-USA kunye neJapan, umgangatho omhle, usebenziso olulula, irejista echanekileyo, i-automatic automation, ukunyathelisa okukhawulezayo kunye nokugcinwa okuphantsi.
4. Ukhuseleko lwe-CE
Isantya sokuprinta: 2500-3600 Amatshana / iyure (ehlengahlengiswayo kwimilo eyahlukeneyo kunye nokushicilela umfanekiso)
Ubukhulu bokuprinta: Ubunzima be-20-90mm, Ubukhulu 25-220mm
Umlinganiselo womatshini: L 2200 * W 3000 * H 2400mm
Amandla: I-AC 380V, i-3-Phase, i-50Hz / 60Hz, i-17Kw (i-UV evamile), i-5Kw (i-UV UV)
ubuchule obuphezulu kunye nokusebenza, ukuhlala ixesha elide, ukwandisa ixesha lokujikeleza, ukunciphisa iindleko zabasebenzi, indleko efanelekileyo, ukushicilela ngokucacileyo umfanekiso kunye nomzobo, uphando kunye nokuphuhlisa ngokuzenzekelayo izixhobo zokuprinta kwesikrini kunye nobuchwepheshe. ukulayishwa kweenqwelo; isondlo sokondla okukhethiweyo, irejista yokubonwa kunye neyobubonakalayo, i-R u0026 D ngokuzenzekelayo izitshixo zokuprinta kwesikrini.
inkqubo yokukhusela yokukhusela umnyango, ukubala inkqubo yokuzikhethela, uhlobo olulungileyo lwenkcubeko olwenziwa ngokuzenzekelayo CNC emithathu imibala yokushicilela kwesikrini kunye ne-teknoloji yemveliso ye-cylindric factory China.